Onye isi obodo İmamoğlu eme nyocha na mpaghara Beşiktaş Metro Excavation - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOnye nyocha obodo İmamoğlu nyochaziri na mpaghara Be Exiktaş Metro Excavation Area
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, VIDEO 0
Onye isi ala bu imamoglu besiktas mere nyocha na mpaghara olulu mmiri metro
Onye isi ala EkBB Ekrem İmamoğlu mezuru nkwa ya tupu e mee oriri a, “A ga m anọ n'okporo ámá nke Istanbul”. Nke mbu, İmamoğlu gara ebe a na-ewu oflọ ọrụ Beşiktaş nke Kabataş - Mahmutbey metro Line. Ğinde Mgbe arụchara ụlọ ọrụ a, ụlọ ọrụ a ga-abụkwa ebe ngosi nka ”. Imamoglu si n'ụgbọ mmiri na-aga Besiktas gaa Uskudar, chọtara nyocha na -eme iwu square ahụ ma nye iwu ka arụchaa ọrụ ahụ ozugbo enwere ike.
Ndị isi obodo ukwu nke obodo Istanbul (IMM) Mayor Ekrem Imamoglu, ụbọchị nke abụọ nke ememme ahụ na Istanbul, ihe owuwu ụzọ ụzọ ụgbọ oloko na ebe a na-adọ aha ya bụ ndị wụsara ebe ndị a na-ewu iwu. Iwere nwa etiti Semih'i na-esote Imamoglu, Kabatas nke mbụ - Mahmutbey Metro Besiktas ọdụ hụrụ na ebe ahụ a na-ewu ụlọ. Rahmi Asal, Onye isi ụlọ ọrụ ihe ngosi nka ihe ochie nke Istanbul nyere Imamoglu ihe omuma banyere mpaghara ahụ, nke e ji ihe ncheta ndị mere akụkọ ihe mere mee n'oge a na-egwu olulu ahụ. Asal kọọrọ Imamoğlu na mgbe a na-egwu olulu mmiri ahụ, na e nwere ihe osise ndị sitere na oge Ottoman na Byzantine yana ebe ili ozu sitere na Oge Ọla. Asal gosiputara Imamoglu ufodu ihe nlere sitere n’ili ala nke echere na odi ihe dika 5 puku 500 ahoro ma jiri ya dika ihe eji eme ya. Asal, nchedo ngwa ngwa nke ihe ncheta akuko aghaghi ime ka edee site na iziga ha na ebe ngosi ihe mgbe ochie, a gha emegheere ndi mmadu igha uzo uzo metro.
“ŞİBŞİTA BEŞİKTA THE agaghị enwe ngwụcha nke ihe”
İmamoğlu zara ajụjụ ndị odeakụkọ na saịtị a na Archaeology Camp Site .. Mamoğlu kwuru, ne Gini di na onwu a na-azọ njem a? Inyela ụbọchị 2020 kachasị ọhụrụ na Jenụwarị, ebe arụmọrụ metro dị na Besiktas nọrọ. ”Ajụjụ a bụ, kazı olulu ndị e mere ebe a dị anyị ezigbo mkpa. N’ihi na enwere ọmụmụ ihe ebe a na-eme ka a mata nnukwu akụkọ gbasara Istanbul. Ọ bụ ihe ịrịba ama na a ga-eji nwayọ ihe ọ bụla anyị na-eme. Ana m achọ ka ihe gaziere ndị nkuzi na ndị ọrụ ibe anyị, ndị na-edozi usoro olulu mmiri ebe a. N’ezie, Istanbul ga-adị n’aka ma a ga-echekwa ụkpụrụ ndị a. Dika ihe omuma ohuru si di, enwere ihe na-egbu oge n'ihi ogwugwu ndi nile gbara gburugburu ulo a, mana Kabataş - Mahmutbey line adighi enye nsogbu. Naanị nkwụsị a ka enwere ike ịrụ ọrụ n'oge. Imeghe nwere ike daa ntakịrị oge. Ozugbo ọdụ anyị na-arụ ọrụ, anyị ga-enwe ike ịnye okirikiri ebe ndị mmadụ nwere ike ịhụ mkpọmkpọ ebe ebe a ka ha na-ada. Ya mere, ọ ga-aghọrọ ọdụ na ebe ngosi nka. ”
ORUM na m atụ anya na mkpesa kacha ọhụrụ na Septemba ”
Imamoglu kwuru, Bal Anyị ahụla ụzọ mkpọda ụzọ na Balmumcu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. O nwere ihe ọ bụla metụtara ya na igwu ala ndị dị n'okpuru ala? ” Nzaghachi Imamoglu maka ajụjụ a bụ, “A naghị egbu oge. Ọ bụrụ n’ịhụ ihe egwu dị otú a, anyị na-enwekwa mmetụta nzere maka ịkpachara anya, ịba ngwa ngwa na ibute ebe ndị ahụ ụzọ. Ekwuputara m na achọrọ m ezigbo akụkọ site n'aka ndị enyi m n'oge ikpeazụ n'ime Septemba. Kachasị arụ ike, anyị ga-anọ n'otu tebụl anyị ga-esonyere ndị mmadụ na-arụ ọrụ ebe a ma ọ bụ ndị ọkachamara n'ọhịa iji mepụta mkpesa ngwa ngwa. Anyị ga-ekpebi maapụ okporo ụzọ iji mee ka ọha na eze mara ma mee ihe ndị achọrọ İmamoğlu kwuru, X mostzọ kachasị sie ike iji ruo Istanbul bụ 3. Airport. Think chere echiche maka ụzọ ụgbọ oloko maka mpaghara ahụ? Onye ọ bụla na-atụ anya ụdị akụkọ ahụ "na ajụjụ ahụ abụghị nke a. Ọzọkwa, okwu a bụ Mecidiyeköy - 3. Ulo elu ugbo elu bu ndi Minista nke Mbughari ugbua. Ọ na-eje ije. Nke a abụghị usoro omume ọmịiko nke obodo mepere emepe. Yabụ, usoro ndị ọzọ, metro - metrobus, n'ọtụtụ ụzọ ka etolite ọdụ nke ọdụ ahụ. Nke a dị na ebumnuche njem. Ugbu a na-arụ ọrụ n'okpuru njikwa nke Ministry of Transport na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'usoro a. Aga m aga eleta ebe ahụ n’oge na-adịghị anya wee nweta ozi. Ọ ga-eme ka ị mata ozi nke anyị nara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị Ministry of Transport ga-enye ozi dị mkpa ”.
“ANY HAVE ejiri okwu niile dọta BAGCILAR rue na ESENLER”
Imamoglu kwuru, "Taa, ị ga-aga ogige ndị Kadikoy-Uskudar. Mpaghara Taksim bụ ebe kachasị achọ ndị Istanbulites. Kedu ihe mbu ị ga - eme atụmatụ maka ebe ahụ? Ua ajuju a bu, “obughi Kadıköy, Üsküdar ma obu Taksim nke ekwuru ọtụtụ maka. Anyị achọpụtala ọtụtụ ogige site na Bağcılar ruo Esenler. Echere m na nnukwu ogige ndị na-apụtaghị ihe ọ bụla gba ọtọ anaghị agbakwunye njirimara n'obodo a. Taksim bụ otu n'ime ha. Ndị mmadụ chọrọ ebe ndụ ha dị mma na ebe ha chọtara. N'ihi na n'ámá a nwere ozi ihe mere eme. N'akụkụ a, anyị achọghị ịnọdụ ala tebụl ma jiri aka anyị mee mkpebi. Ọzọkwa na Taksim ndị enyi anyị ekpebisila ụzọ map. Anyị na-eme atụmatụ ịchịkwa ihe omume ndị dị n'ihu ọha na mpaghara iji guzobe asọmpi na kọmitii ndị na-ahọpụta iji nweta usoro ọrụ ahụ ike ngwa ngwa. Anyi bu n’obi igosi ya n’echiche onye amaala. Mgbe usoro dị otú a rụpụtara, anyị ga-eso gị kerịta ya. Anyị ga-ekerịta ya n'oge na-adịghị anya. ”
ŞEMSİ PAŞA MOSQUE NA AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ AKA NA-AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ MAKA FORM FORAKA SINAN SQUARE.
Imamoglu na ndị nnọchianya ya na ha so banye ụgbọ mmiri si Besiktas gaa Uskudar. Imamoglu, onye isi ụgbọ mmiri n’ọdụ mmiri, redio na ndị isi ụgbọ mmiri na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eme ememe. Imamoglu si n'ụgbọ ahụ rịdata ilele owuwu ụlọ ọrụ Uskudar, ọtụtụ narị ụmụ amaala gburugburu n'otu oge. Imamoglu nwere mmekpa ahụ na ụmụ amaala, ụmụ amaala were ọtụtụ foto. Imamoglu, nke nwere ike were ihe dị ka okporo ụzọ 200 dị na nkeji 45, nyere ndị isi saịtị ahụ ozi ihe omuma. Imamoglu jụrụ ndị isi obodo banyere ihe ndị merenụ n'oge a na-ewu nhazi mpaghara ahụ na ntọala nke ụlọ alakụba Semsi Pasha nke dị n'akụkụ ebe owuwu ahụ. Imamoglu, ihe owuwu nke mpaghara ahụ, na-emerụghị ndị gbara ya gburugburu na ụlọ ndị mere ihe akụkọ ozugbo enwere ike ma chọọ ka emeghee ya ka ọ ga-aga n'ihu. Ihe ọzọ İmamoğlu mere dọtara uche bụ mmeghachi omume sitere n'aka ndị ahịa nọ n'ógbè ahụ banyere Mmepụta Mimar Sinan Square nke ụlọ ọrụ IMM wuru na Üsküdar. Imamoglu, ndị ọrụ aka na ndị ọrụ gọọmentị metụtara ọrụ nke ogige ahụ chọrọ izute gburugburu tebụl nkịtị. Ekpebie ibido ọmụmụ ihe ozugbo enwere ike. Imamoglu na-agagharị ebe a na-ewu ụgbọ elu mgbe nzukọ ahụ gasịrị, ụmụ amaala n'okpuru nnukwu mmasị ụgbọ mmiri ahụ gafere na Besiktas. Imamoglu, Sishane CHP Istanbul Provincial President na ndị ọzọ ga-eri oriri Canan Kaftancıoğlu.
Mayor Topbaş gara ileta ihe omimi ihe ochie na Beşiktaş Metro Station 29 / 08 / 2017 Press mgbe ochie saịtị nchọgharị Mayor Kadir Topbaş Besiktas Metro Station na òtù, "ndị 82,5 percent nke Stone-Mahmutbey Underground gwupụtara gwụchara. Anyị na-eme atụmatụ imepe Mecidiyeköy-Mahmutbey mgbe ọkara nkera nke 2018. Kabatas-Mecidiyeköy nwere ike ịgbatị na June nke 2019 n'ihi ihe ndị a na-emepụta ihe ochie nke Kab. Kadir Topbaş, Mayor nke obodo Istanbul Metropolitan Municipality, nyere ihe omuma banyere ihe omumu ihe omumu nke Kaghaş-Mahmutbey Metro Station. Istanbul Archaeology Museum Director Zeynep banyere Kızıltan ubi ọmụmụ mụụrụ si Mayor Kadir Topbaş, kwuru na a na nkwupụta ka akuko, o kwuru na ha na-eme atụmatụ iji wuchaa na ihe ochie gwupụtara malitere na njedebe nke afọ 2016. 24,5 kilomita X
Onye isi ala İmamoğlu na-eme nyocha na Galataport 07 / 08 / 2019 Onye isi ala IMM Ekrem Imamoglu, Zeytinburnu "Buyukyali" na "Seagull" na Kabatas mgbe Galataport'da mere nyocha. Imamoğlu kwusiri ike na ọ ga-eleta ọrụ niile ga-emetụta obodo ahụ, "Nke a bụ otu n'ime ọrụ 20 anyị chọtara. Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), gara ụlọ ọrụ Galataport na Karaköy ma nata ndị isi. IMamoğlu sochiri odeakwụkwọ Secretary General Yavuz Erkut na ndị enyemaka ya. Emamoğlu kwusiri ike na ọ gara ọrụ ndị ga-emetụta Istanbul, "Anyị chọrọ ịmụ otu otu, ọnụ. Iji ghọta ihe emere, mmetụta ya na gburugburu ebe obibi ya na…
Onye isi oche nke AK na-achịkwa Kilic, Palandoken Logistic Village Construction Site Nnyocha achọta (Photo Gallery) 07 / 10 / 2013 AK Party Provincial President Sword, Palandöken lọjistik Village Review Hụrụ na Construction Area: AK Party Erzurum Provincial President Murat Kilic, nnyocha chọpụtara site na ịga Palandöken Logistic Village. Lọjistik Village 12 puku square mita, na-egosi na Sword ebu ihe nchọ ohere, ọ bụghị nanị na Turkey, Ankara, Halkalı nakwa na e nwere obodo nta dị iche iche dị na Samsun. 4. A ga-eguzobe obodo nta mara mma na Erzurum, onye isi obodo Kılıç kwuru, d Arụmụka na-enye nnukwu onyinye maka mmepe akụ na ụba nke gburugburu ebe obibi ndị obodo dị. Obodo a na-amachi anya bụ ego nke onye ọ bụla chọrọ. Ya mere Erzurum nwetara ezigbo ego. N'ebe nchekwa a na-eme ebe a, ndị na-emepụta na ndị na-emepụta ihe na-eji Erzurum iler
Ihe omuma ihe mere eme na Beşiktaş Metro Excavation 17 / 08 / 2017 Na nwube nke ọdụ ụgbọ ala dị na Besiktas, a chọtara mkpọmkpọ ebe nke oge nchịkọta. A na-ekwu na ihe ndị a chọpụtara n'oge a na-egwupụta ihe ndị dị na Istanbul Archaeological Museum ma mee atụmatụ na ha ga-aga 6 puku afọ gara aga bụ ndị mbụ maka Bosphorus. Achọpụtara ịghaghachi azụ na 19 na 20 narị afọ gara aga mgbe a na-emegharị nke Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro line na Beşiktaş. Ụlọ Ọrụ Nchekwa Ihe Nketa nke Iwu ahụ adịghị mkpa iji chekwaa ntọala ụlọ dị ugbu a, wee kpebie iwepụ ihe ndị ahụ site na ịmepụta nyocha na nyocha. Ihe omumu ihe omumu ka na-aga n'ihu nlezi ihe ngosi nke Museum. BRAND NEW DISVOVERY Ihe ngosi ndị a bụ n'ezie Istanbul na karịsịa ...
Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş Ụzọ ụgbọ oloko na-arụ ọrụ n'Ọrụ n'Ọrụ 22 / 05 / 2015 Mecidiyekoy-Besiktas-Kabatas Metro na-ewu ụlọ ọrụ ọnwụ: ụnyaahụ tọrọ ntọala nke Mecidiyekoy-Besiktas-Kabatas Metro Line Mecidiyekoy ọdụ ụgbọ oloro nwụrụ n'ihi ihe mberede n'oge ọrụ. Dika ozi ndi mere site na ihe omume di oke egwu, Mecidiyekoy-Besiktas-Kabatas subway construction took place in the construction of the station. Istanbul Metropolitan Mayor site Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas, n'oge ikpeazụ isi ọmụmụ nke tụfuru atụfu na-ewu nke ụgbọ oloko, ọdụ n'akụkụ nke igwefoto ọrụ 03.00 afọ Adil Kolukısaoğl bụ, kwuru, e kwuru na-ada ihe n'ala, adịkwa itule. Kolukısaoğlu, nke onye na-arụ ọrụ ihe owuwu na-ahụghị, dị n'okpuru igwe ọrụ
President Karaosmanoğlu na Durmazlar Factory 19 / 12 / 2016 President Karaosmanoğlu Durmazlar Hụrụ omumu nke Osisi: Turkish World Municipalities Union (TDBB) na Kocaeli Mayor Ibrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli ga-eji na tram oru ngo, nke ga-amalite okporo ígwè nyefe 12 Total trams adịghị akwụsị ụgbọala mere e rụrụ nnyocha na Machinery Industry Factory. Anyị ga-eru ọkwa nke mepere anya na 7,2 kilomita ma rụọ ọrụ na ntinye 14.4. Na nkwupụta mgbe nyochachara, açık
Mayor Celik gara General Hulusi Akar Boulevard 12 / 04 / 2018 Obodo Kayseri Metropolitan na-aga n'ihu na-etinye ego na njem ya n'emeghị ngwa ngwa. Mayor Mustafa Celik, General Hulusi Akar Boulevard, nke ga - abụ otu n'ime obodo dị mkpa n'obodo ahụ, mere ka ọ hụ. Mayor Mustafa Celik, General Hulusi Akar Boulevard, a ga-enwe njikọ nke Farabi Street na nkwụsị nke Aydin Pasha Bridge na mpaghara ahụ. Mayor Celik kwuru na ntọala nke Aydogan Aydin Pasha ga-etinye na 21 April Saturday. Mgbe ahụ, na-agafe aha mbụ nke Tavlusun Street, nke bụ usoro n'ihu General Hulusi Akar Boulevard, Mayor Çelik soro ọrụ banyere mgbatu ụlọ ochie. Ọrụ gị na yovun boulevard
Mayor Celik gara General Hulusi Akar Boulevard 11 / 09 / 2018 Onye isi obodo Kayseri, Mayor Mustafa Celik, Kayseri, nke ga - ewetara ndi mmadu uzo di iche iche n'ozuzu ha na General Hulusi Akar Boulevard. Mayor Celik, Hulusi Akar Boulevard na usoro ohuru, kwuru na ha ghọtara nhazi ngwa ngwa. Mayor Mustafa Celik, General Hulusi Akar Boulevard na boulevard n'ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ ga-emeghe ka okporo ụzọ na obere oge, o kwuru. Mfe 14 ga-abụ Hulusi Akar Boulevard Mustafa Kemal Pasha Boulevard ka na-aga n'ihu Malatya Road nke na-akọwa President Celik, "Otu akụkụ nke boulevard na-agafe usoro okporo ígwè. Anyị rụrụ ọrụ ngwa ngwa ebe a. Ihe dị mkpa bụ ar
Onye isi oche, Ahịa Ahịa Ụlọ Ahịa E Nwere n'Achọpụta 20 / 12 / 2018 Obodo nke Kayseri Metropolitan na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji mee ka ndị obodo ahụ ghara imebi mmekọrịta dị mkpa. Onye isi oche bụ Steel, Terminal Junction na-ewu ụlọ ntanetị dị iche iche. Obodo ukwu dị na ya na-ewu ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ọtụtụ mita 550 na obosara nke mita 20, tinyere ntinye ọpụpụ na-abanye Osman Kavuncu Boulevard Terminal Junction. N'agbanyeghị oge oyi, ọmụmụ na-aga n'ihu na-ewu ụlọ nke ọtụtụ ụlọ ahịa Mayor Mustafa Celik, kwuru na ha na-arụ ọrụ iji mezue ọrụ ahụ tupu oge. Na-ekwupụta na ha na-arụ ọrụ n'ekwughị snow oyi President Mustafa Celik, a malitere itinye ọrụ ahụ n'ime ihe ndị a na-emepụta tupu oge ahụ. Na Terminal Storey Junction ...
Mayor Mutlu na-eme nyocha na ụzọ mgbanaka 21 / 10 / 2014 Mayor Mutlu nyochara na okporo ụzọ mgbanaka: Bucak Mayor Süleyman Mutlu nyochare ọrụ ndị ahụ n'okporo ụzọ. Bucak Mayor Süleyman Mutlu, onye nyochare oru nke okporo ụzọ 4 kilomita dị n'etiti okporo ụzọ Sazak na Organised Industrial Zone, kwuru, sị, "Ụzọ a anyị mere na Ngalaba Management Management ga-adị mma maka ụgbọala ndị na-ebu osisi, nkume na nkume. otutu ndi mmadu ga-ebelata oke ohia.
3. ọdụ ụgbọ
Beşiktaş Mpaghara Mgbapụta Ugwu
Mecidiyeköy 3. Ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu
Taa na History: 13 August 1993 TCDD Museum na Izmir
Mayor Topbaş gara ileta ihe omimi ihe ochie na Beşiktaş Metro Station
Onye isi ala İmamoğlu na-eme nyocha na Galataport
Onye isi oche nke AK na-achịkwa Kilic, Palandoken Logistic Village Construction Site Nnyocha achọta (Photo Gallery)
Ihe omuma ihe mere eme na Beşiktaş Metro Excavation
Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş Ụzọ ụgbọ oloko na-arụ ọrụ n'Ọrụ n'Ọrụ
President Karaosmanoğlu na Durmazlar Factory
Mayor Celik gara General Hulusi Akar Boulevard
Onye isi oche, Ahịa Ahịa Ụlọ Ahịa E Nwere n'Achọpụta
Mayor Mutlu na-eme nyocha na ụzọ mgbanaka